Forex VPS - Best Forex EA ny | Expert Advisors | FX Robots
Varotra Fx VPS - VPS Varotra Forex natokana indrindra (= Server Virtual privé)
A Virtual Private Server (= VPS) dia solosaina iray eo amin'ny tranonkala iray nohiraina, izay azonao atokana mivantana amin'ny alalan'ny solosainan'ny PC na ny laptop.
A Forex VPS manatanteraka sy manatanteraka azy toy ny solosaina irery. Azonao alefa ny anao Expert Advisors ary ny sehatr'ireo Metatrader brokers ho anao Forex VPS, ary hazonoy izy ireo tahaka izay azonao amin'ny solosainao manokana.
Amin'ny fampiasana a Forex VPS, misy ireto manaraka ireto lehibe tombony:
Tsy mila mitazona ny solosainao manokana ianao amin'ny fotoana rehetra.
Tsy mila miantehitra amin'ny aterineto na ny fifandraisana ianao, mba hahafahan'ny VPS hihazakazaka.
Tsara kokoa ny fampiantranoana Forex VPS Trading FX VPS dia mitombo isaky ny 99.9%.
Nahoana ianao no tokony hampiasa Forex VPS azo antoka
Raha toa ka very ny fifandraisanao aterineto any an-trano (tranga matetika ho an'ny olona maro), ny anao Forex EA Mety tsy hahavita fivarotana na anao ianao Forex Robot Mety ho eo antenantenan'ny varotra ary tsy manidy azy ara-dalàna. Na izany na tsy izany dia mety ho lafo be izany. Ny mpamatsy VPS azo antoka dia mamaha io olana io ary tsy maintsy atao amin'ny mpivarotra lehibe rehetra izay maniry ny hihazakazaka FX Robots. Rehefa mifampiraharaha amin'ny anao Forex Expert Advisors, aza mety ho "mpanefoefo, vidin'ny adala."
Rehefa manapa-kevitra hoe iza VPS provider Mba hampiasana, eritrereto raha manome izany:
Tolotra azo antoka izay tsy midina mandritra ny faran'ny herinandro.
Farafaharatsiny farafahakeliny amin'ny 99.9%. Ary indrindra indrindra ny tsy fahampian-tsakafo.
Mpanompo Windows izay tsy mamarana ny fivoriana rehefa miala amin'ny VPS ny mpampiasa.
Fiarovana sy fiarovana tanteraka.
Nihevitra izahay lafin-javatra ireo, ary mampiasa Trading FX VPS ho an'ny fivarotana mivantana sy ny kaonty test de demo.
Momba ny varotra Fx VPS - Makà tombony amin'ity Forex Forex VPS ity
Trading FX VPS Offers Premier namboarina Virtual Private Servers manokana ho an'ny mpivarotra. Ny tanjona dia ny hanomezana mpivarotra amin'ny vahaolana azo itokisana VPS cater mazava ho sarotra varotra mandeha ho azy. Ny ekipa javatra dia avy isan-karazany matihanina manana fahalalana be amin'ny solosaina fiarovana, tambajotra sy ny rafitra fitantanana. Nanomboka ny fiandohan, ny ekipa dia nahazo fiderana faran'izay tsara foana famerenana ny mahomby, mahay sy takatry ny asa fanompoana.
Ity Forex VPS ity dia manome fitaovana am-pahamarinana voalohany avy amin'ny Hewlett Packard, Dell, Intel & IBM. Ny fahasamihafana amin'ireo mpamatsy herinaratra dia mampihena ny loza mety hitranga amin'ny fiatrehana ny fiarovana. Noho izany dia manana antoka ianao fa ny VPS dia ampahany amin'ny serivisy mahery fo sy azo antoka. Ny serivera dia nakambana miaraka amin'ny SSD RAID10 array arangarangan'ny SAS sy SSD haingam-pandeha. Manolotra haingana haingana amin'ny fampahalalana amin'ny 10-20 fotoana haingana kokoa noho ny ankamaroan'ny mpamatsy fampiantranoana mampiasa SATA fiara. Amin'ny fampiasana ny RAID10 array, ny orinasa dia miantoka ny angon-drakitra virtoaly virtoaly dia tsy ho tratry ny tsy fahombiazan'ny fiara.
Fahamarinana bebe kokoa momba ny varotra Fx VPS - ny Forex VPS natolotray indrindra
Trading FX VPS dia tsy toy ny mpizara VPS maro hafa izay manefa ny servisy virtoaly. Manolotra loharano azo antoka ho an'ny vahaolana VPS rehetra izy ireo. Izy ireo dia manangana teknolojia Virtual Machine Kernel (KVM) sy VMware.
Amin'ny alàlan'ny VMware flexibility framework, ny orinasa dia afaka miantoka ny 100% ny fotoana fampiasana amin'ny VPS.
Lohamilina rehetra ny Trading FX VPS dia hita ao amin'ny ara-jeografika efatra misaraka Data Centres - London, New York, Amsterdam sy Frankfurt, manokana naka ny Ultra Low Latency sy ny fidirana ho an'izao tontolo izao ny lehibe sy ny liquidity mpanakalo mpanome tolotra.
Ireo ivon-toerana dia voatondro ary avy amin'ny orinasa miavaka, Equinix, Leaseweb & Internap.
Ireo mpampiantrano mpampiantrano dia mifandray amin'ny fantsom-pahombiazan'ny haingam-pandaharana avo lenta ary manana fahaizana goavana izay mahatonga ity fanompoana ity ho iray amin'ny tsara indrindra amin'ny tsena.
Customer fanompoana dia miavaka amin'ny Trading FX VPS. Ny manerantany mpanjifa fototra dia ahitana algo varotra mahamety amin orinasa, mpivarotra tsirairay sy ny andrim-panjakana ara-bola hafa.
Ny fanapahan-kevitra dia tsara iray ary efa tena faly Trading FX VPS tolotra.
Ahoana ny fitsapana Fx VPS Trading, ny hafa VPS sy MT4 hafa Forex?
Ny ankamaroan'ny olona dia manandrana manjavozavo amin'ny hafatra PING. Indrisy anefa, ny hafatra PING dia manome fepetra henjana momba ny fahateren'ny rafitra ankapobeny ary ny ankamaroan'ny fotoana mamohehatra momba ny fahateren'ny tena. Voalohany indrindra, ny hafatra momba ny varotra dia mampiasa fampitàna hafatra hafa samy hafa amin'ny fangatahana samihafa ao amin'ny tambajotra sy amin'ny tranokala hafa.
Tapa-kevitra amin'ny ankapobeny latency by:
Ny haavon'ny hafatr'ireo hafatra (matetika TCP / IP fa tsy ICMP toy ny hafatra PING) dia mandeha amin'ny serasera eo anelanelan'ny toerana roa.
Ny haavon'ny haavon'ny mpivarotra zato dia afaka mameno ny kalkilany, izay rindrambaiko sy orinasa miankina aminy ary tsy azo alaina amin'ny PING.
Ny fanemorana napetraky ny antoko hafa nandritra ny famonoana.
Ohatra lavitra ny marina fa mba ho feo kokoa teknika mba hitsapana ny tena MT4 setup latency amin'ny fomba nanazava ny lahatsary eto ambany noho ny fandefasana hafatra Ping.
Tsindrio eto ary maka ny Latency Tester ho maimaim-poana!
Ataovy azo antoka fa rehefa vita tsy misy misokatra baiko na ny toerana sisa ao an-MT4. Raha te mba hahatonga ny fitsapana eo amin'ny velona ihany kaonty noho ny manao izany amin'ny mety manokana.
Araka ny voalaza etsy ambony, mpanjifa dia miavaka amin'ny Trading FX VPS.
Tsidiho ny tranokala ofisialin'ny Fx VPS Varotra ofisialy - Hosting tsara indrindra an'ny Forex VPS Hosting